Waligay Codkiisa Maan Maqal, Ma Garanayo Waxaan Ka Fisho - Maurizio Sarri Oo Weerar Culus Ku Qaaday MULKIILAHA Chelsea Iyo Shaqadiisa Oo Halis Ku Jirta - GOOL24.NET
Waligay Codkiisa Maan Maqal, Ma Garanayo Waxaan Ka Fisho – Maurizio Sarri Oo Weerar Culus Ku Qaaday MULKIILAHA Chelsea Iyo Shaqadiisa Oo Halis Ku Jirta
February 11, 2019 Cabdiwahab Ahmed
Tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea, Maurizio Sarri ayaa weerar culus ku qaaday mulkiilaha kooxdiisa Chelsea, Roman Abromavich kaddib bahdilaaddii xalay ay kooxdaas ay u geysatay Manchester City oo ku xasuuqday 6-0.
Blues ayaa guul-darradii ugu weynayd abid taariikhdeeda Premeir League, waxa xalay loogu xambaariyey garoonka Etihad oo Man City ay ku dhex jiidjiiday, taas oo keentay in markii uu garsoore Mike Dean ku dhawaaqay siidhiga dhamaadka ciyaarta uu Sarri iska diido inuu salaamo Pep Guardiola oo ah ninka soo farsameeyey shaxda ay City ku bahdisay Blues.
Sergio Aguero ayaa saddex ka mid ah goolasha dhaliyey, labana waxa ku daray Raheem Sterling, halka goolka lixaadna uu raaciyey Gundogan.
Kaddib guul-darradaas, waxa soo baxday hadal-haynta ah xilliga uu soo bixi doono go’aan adag oo shaqo ka caydhin ah oo lasoo gaadhsiin doono Maurizio Sarri, halkii taas laga sugayeyna waxa soo baxday arrin kale oo ah in isla tababaraha jarka ka laalaada uu weerar ku qaaday mulkiilaha kooxdiisa ee la filayo inuu shaqada ka caydhiyo.
Sida ay qortay warbaahinta Football Italia, Sarri ayaa sheegay in aanu weli wax telefoon ah ka helin Abromavich, illaa intii uu shaqada qabtayyna aanay wax xidhiidh ah wada yeelanin, halkii ay ka ahayd inay si joogto ah u wada xidhiidhaan oo ay arrimaha kooxda uga wada hadlaan.
“Haddii madaxweynuhu uu telefoon iga soo waco, waan ku farxi lahaa, waayo waligay codkiisa maan maqal. Haddii aan si daacad ah u hadlo, ma garanayo wax aan ka fisho.” Sidaas ayuu yidhi Sarri oo ay soo xigatay Football Italia.
Hadalkan oo ahaa weerar ayaa waxay warbaahintu u fasirtay inuu ahaa weerar uu ula jeedo madaxweynaha oo ay ahayd marka horeba uu jiray qanacsanaan la’aan dhinaca mulkiilaha ah oo xattaa aan wax xidhiidh ah lasoo samaynin tababaraha isagoo ah maamulihii ay taladu ka go’aysay.
Si kastaba ha ahaatee, hadalkan kasoo yeedhay Maurizio Sarri ayaa waxa uu caddaynayaa in aanay waxba u oollin garoonka Stamford Bridge, maadaama uu mulkiilihii kooxda uu warbaahinta horteeda ku weeraray.
bernado silva mu dhalin goolka ee waxa dhaliyay Gundogun
Kaaga xanuunka ihi meesha kuma taalo bernado silva
Yaaba Ku yidhi Bernardo Silva dhaliyey